Antony Raj Jayamani raacdeena ka socda Linkedin | Shaqooyinka - Shaqada - Safarka Jacaylka Dubai!
7 Talooyin loogu talagalay horumarinta xirfadaha maamulka ee aan caadiga ahayn
Antony Raj Jayamani oo ah kaaliyahayaga ka socda Linkedin. Wuxuu ku guuleystey inuu noo soo diro emayl deg deg ah oo leh isaga cusboonaysiiyay sawir laga keenay Dubai.
Halkan ayaan imid ku aaday Dubai oo bilaabay hawshaydii bisha Maarso 5th 2018. "Markii aan imid Dubai, waxaan ahaa eber mana aanan ka helin soo bandhigid keliya dunidoo dhan. Sannad kadib Dubai waxay iga dhigaysaa nin waxayna igu siisay kalsooni intaas ka badan ka dib waxaan helay aqoon dheeraad ah. Dubai waxay i tustay nal ka yimid qayb mugdi ah oo noloshayda ah. Hadda waxay noqotay sidii guri labaad, waxaan jeclahay inaan sii joogo Dubai. Waxaan u rajeynayaa dhamaan guulihii ugu wanaagsanaa ee kobaca Dubai. Aad ayaan ugu mahadnaqayaa madalkan si aan u kashifiyo waxbariddayda.
Maxay Antony u dooratay Dubai?
Erayo kuma sharixi karaan Dubai iyo hogaankeeda. Safarro badan oo ka socda Hindiya ayaa booqday Dubai ugu yaraan 2 jeer oo aan jeclaan lahaa inay ku noolaadaan halkaas oo halkaas ka shaqeeyaan. Wax walba waa uun aad ufiican oo hagaagsan. Waa sida Jannada Dhulka.
Dad aad u badan oo faraxsan. Waxaan dhamaanteen rajeyneynaa in dalalkeenna hooyo ay u ekaan doonaan Imaaraadka Carabta. Waxaa intaa dheer, loo maareeyo sida Hogaamiyaha Dubai raacitaanka tusaale ahaan sida ay tahay inay ula ekaadaan muwaadiniintooda. Dubai waxay leedahay adduunka oo dhan. Oh, Dubai maxaa meel qurux badan oo aad noloshaada ku dhex noolaan karto. Waxaan dhamaanteen rajeyneynaa inaan halkaas ka helno shaqo oo ah nashqadee dhacdo ama maamule.
Waxaa jira tamar badan oo wanaagsan!
Dubai waa magaalo ganacsi, halka taas lagu sheegay markii aad u duulay Dubai oo aad halkan ka shaqeysaa. Weligaa ma dareemi doontid cidla, dadku waa dad soo booqda, aqoon iyo wixii la mid ah. In la bilaabo shaqo ugaadhsiga waxay noqon kartaa waxoogaa daganaan ah, sababta oo ah tartanka suuqa maanta. Taasina waxay keentay inay dadku si xikmad leh u doortaan dadka khibradda u lehna waxaa la siin doonaa doorbidis badan shaqo wanaagsan.
Iyo halka si dhib yar ayaa loo madadaalin doonaa, sidaa darteed hadaad tahay mid si fiican isu diyaarinaysa naftaada, ugu yaraan shaqeyso diyaar ha ahaadee in shirkadaha qaar ay soo bandhigaan lacag aad u badan halkii ay ku bixin lahaayen lacag badan oo shaqaaleysiinaysa xirfadleyda bartanka, iyo marka aad shaqo u raadiso Dubai iska hubi shabakadaha dhabta ah. Qaar ka mid ah websaydhada borogaraamku waxay kugu dabiibi karaan baalasheeda hoostooda oo ay ku weydiisan karaan lacag, halka ma jiraan shirkado weydiin kara lacag loogu talagalay nooc kasta oo qorista.
Dubai ma ahan mid sahlan in la helo xirfadda la rabo
Iskusoo wada duuboo, waxaan dhihi lahaa taasi maahan fududahay inaad ku degto shaqada aad rabto, halkii aad ka qaadan lahayd heerka heerka gelitaanka ee aad ka doorbideyso wershadaha aad rabto. Ka dib marka aad dhammeyso heshiiskaaga ugu horreeya ee lala galay isku day inaad codsato boos kale oo ku yaal Imaaraadka. Xaqiiqdiina waxaad heli doontaa booskaaga aad rabto ka dib markii aad qibrad tusaale ah ka hesho Dubai.
DUBAI, gabadhay indhahayga, waxaad tahay a Dream, Unique, Beautiful,
Aruntii iyo Inspiring.
Dhamaanteen waan jeclahay Dubai City!
Dubai waa mida ugu badan magaalooyinka ganacsiga maalmahan Bariga Dhexe. Waa isku darka Indian iyo Pakistani, iyo sidoo kale, Iraniyaanka iyo Filibiin qurbajooga. Magaaladu waa jawi casri ah, futuristic ah oo cusub, iyo meelo kala duwan oo loogu talagalay dadweynaha oo dhan.
Waa wax cajiib ah in la arko dhaqamo badan oo kala duwan oo hal meel ah oo la tago ogaada dhaqanka carabiga isla waqtigaas.
Meelo badan ayaa jira magaalada dhexdeeda sahaminta iyo madadaalada. Maanta waxaan ogaan doonnaa maqaayadaha iyo baararka. Meelaha aadka u xiisaha badan waa Dubai Marina, oo ah dhul ay ka buuxaan maqaaxiyo aad u wanaagsan iyo baararka leh muuqaal qurux badan oo hoteel qurxan Burj Al Arab. Waxaad dareemi kartaa jawiga carbeed ee qalaad iskudayida cuntada caadiga ah ee Carabiga inta aad shisha –wax aaladda sigaar cabista maxalliga ah oo leh dhadhan kala duwan. Barista waa meesha labaad ee ay ka buuxaan baararka wanaagsan iyo kafateeriyada meesha aad ku raaxeysan karto dhexgalka dad aad u tiro badan adduunka oo aad waqti fiican la qaadato.
Waxaa jira waxyaabo badan oo laga sameeyo Dubai
Meesha saddexaad waa kooxda Armani oo ka tirsan Burj Khalifa. Naadiga quruxda badan oo leh jawi aad u wanaagsan, muusig wanaagsan iyo is biirsaday. Oo yaanan iloobina cidlada. Haddii aadan adigu ahayn cidla ah markaa imaad tagin Dubai. Ku safridda safarka cidlada ah waa mid ka mid ah waaya aragnimada ugu weyn. Kula boodista baabuurta qalajiska leh ee ciidda ah, fuushan awr, qado qaadashada iyadoo la daawanayo qoob ka ciyaarka carbeed waa mid waayo-aragnimo aan la ilaawi karin oo ah waajib in la sameeyo markii la booqanayo Dubai.
Laakiin tan, waxaan ku soo bandhigi doonaa qormada soo socota halka ay tahay Waxaan ogaan doonnaa cidlada iyo waxa u eg inay wax ka dukaameystaan ​​Dubai. Tani waa magaalo qarineysa meelo badan oo la yaab leh iyo munaasabado lagu baarayo. Dubai waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu xiisaha badan uguna xiisaha badan adduunka.
Joog sii wad awoowrka soo socda!
Dubai waxaa loo yaqaanaa magaalada ganacsiga, halka la sheegay in malaayiin dad ah ay u duuleen Dubai si ay u helaan shaqo ama ganacsiyo yar yar weligoodna ma dareemi doonaan cidlo ahaan si dabiici ah inay u noqdaan aqalkoodii labaad. Dadku waa dad soo dhawayn leh, wax bartay oo wax badan looga baahan yahay Dubai.
Maxaa ka dhigaya Dubai mid aad u caan ah?
Dubai maalinba maalinta ka dambaysa way sii kordhaysaa, sannadihii la soo dhaafay si weyn ayey isu beddeshay, Expo 2020 ayaa ka horeysa halka in ka badan dalalka 190 ay ka qeybqaadan doonaan Oktoobar xigta 2020. Marka laga dhiso mitir magaalada Dubai waxay ka dhigeysaa safarka mid aad u sahlan, taraafikada jidadka waxay u horseedaysaa caajiso dadku waxay door bidayaan metro halkii aad ka heli lahayd bas ama taksi, oo aan ahayn magaalada Dubai waxay leedahay naqshad casri ah oo casri ah iyo muuqaallo nolol xumo leh, makhaayado badan oo ay ka dooran karaan dadka ku nool Dubai waa cunto-waqti aad u weyn, waxaad isku dayi kartaa inta ugu badan ee cunnada ka keento adduunka oo dhan.
Dubai waxaa sidoo kale loo yaqaanaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu nabdoon adduunka, halka heerarka dambiyada ay aad uga yar yihiin, iyo Dubai waa magaalada kaliya ee adduunka ee leh Supercars Supercars, waxay dib ugu noqotaa waqtiga ay dadka Dubai aad u jecelyihiin baabuurta, taasi waxay ka dhigeysaa mid aad u xiiso badan booliiska Dubai ayaa ku soo daray supercars duuliyadooda oo ay ku jiraan Buggati, Aston. Martin, Rolls Royce, iyo waxbadan oo dheeri ah. Dubia sidoo kale waxaa loo yaqaanaa xarun caan ah, halka ay aad u fara badan yihiin Damaashaadka Filimka, Munaasibadda Abaalmarinta ayaa dhacda rubuc kasta.
Jilayaasha adduunka oo dhan qubeyska jacaylka Dubai iyo cinwaanadooda oo ah aqalkoodii labaad, waxay halkan u yimaadaan wax ka adeegashada, la kulanka iyo salaanta taageerayaasha iyo toogashada filimka gaar ahaan meelaha Neefta leh sida Burj Khalifa, Burj Al Arab, iyo Jumeirah Beaches, Marka laga soo tago showbiz, Wax yar oo inaga mid ah ma ogayn in Dubai ay ku sadaqeyso hay'ad samafal ah, dadka halkan jooga waxay aaminsan yihiin wadaagistu inay daryeesho, waxay u muuqdaan inay caawinayaan kuwa liita. markasta oo ay soo maraan Fursad kasta oo ay ku gaadhaan waqtigooda gudahood si loo hubiyo inay nabad qabaan.
Hogaamiyaha Dubai HH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum iyo aktarada Hollywood-ka Tom Cruise (Ganacsiga Carabta)
Dubai waxaa loogu talagalay dadka shaqo doonka ah?
Dadka shaqo doonka ah ee ku nool Dubai ayaa meelaha qaarkood ku noolaan kara oo wax bilaash ah wax ugu cunaya, halka dadka reer Dubai ay gacmaha u fidiyeen si loo caawiyo dadka shaqo doonka ah inta ay kari karaan, dadku waxay ku bilaabi lahaayeen mala-awaal haddii ay runtii tahay mid bilaash ah, maahan qof walba markii aan idhaahdo lacag la’aan, waxaa jira dad gaar ah oo bulshada ka tirsan oo sifiican ula dhaqma shaqo doonka. kuwaasoo iskudaya inay caawiyaan kuwa baahan.
Ama xitaa haddii aad ubaahantahay inaad ku noolaato booska bachelor-ka waxaad leedahay ikhtiyaaro badan oo leh qiime jaban oo leh adeeg hufan, waxaa jira hoteelo ku yaallo meelaha qaarkood halka ay joogaan shaqo raadiyaha ayaa si ku meelgaar ah uga bixi kara iyadoo ku xiran fiisahaaga, ka hor intaadan u duulin Dubai, waa inaad sameysaa baaritaanka saxda ah gaar ahaan dadka isku arka inay yihiin shisheeye magaalada gudahiisa ah, kuwa iyagu leh saaxiibo ama qoys ayaa si fudud ula qabsan kara.
Waa inaad sidoo kale la socotaa xeerarka taraafikada ee Dubai, taxaddar intaad goynaysid dadka lugaynaya waxaad ku dambayn kartaa bixinta ganaax culus oo ah shuruucda aan la raacin, qashinka lagu daadinayo wadada, ku tuubista jidadka waaweyni dhibaato ayey kugu geli karaan, markaa feejignow oo iska ilaali howlaha noocaas ah, had iyo jeer waa inay wataan nuqul fiiso ah inaad dhinacaaga aaminka ah sida booliisku ay kugula wareegaan xabsiga iyaga oo aan hayn dukumintigaaga lama huraanka ah ilaa aad ka haysato Aqoonsiga Imaaraatka, kaas oo waad heli doontaa ka dib markaad shaqo hesho, kuwanu waa qaar la sameeyo oo aan la rabin.
Sida loo bilaabi lahaa shaqo raadinta UAE?
Inaad ku bilowdo shaqo ugaadhsiga waxay noqon kartaa waxoogaa daganaan ah, tartankii maanta ka jiray dadka maanta suuqa keenay waxay u doortaan booska si xikmad leh, waxa jira dad ka kala socda dalal kala duwan oo hibo badan leh, xirfado leh iyo dad khibrad u leh ayaa la siin doonaa doorbidid ka badan taas oo ah run.
Markaa, halka mustaqbalkiisu si dhib yar u madadaalin doono, markaa haddii aad tahay bilaa-hore u noqo naftaada sifiican u diyaari, noqo ugu yaraan shaqada diyaar si shirkadaha qaar u soo bandhigaan qaddar lacageed halkii ay lacag fara badan ka dhigi lahaayeen shaqaalaynta xirfadlayaasha dhexe, qaarna sidoo kale shaqa qorista ayaa waliba lasocota shaqo doonka ah ee Kuweyt.
Freshers gaar ahaan, Marka laga reebo taas marka aad shaqo u raadiso Dubai Hubso boggaga internetka ee dhabta ah, qaar ka mid ah websaydhada borogaraamku waxay kugu dabiibi karaan baalasheeda oo ay lacag weydiisan karaan, halka shirkadona aysan lacag ku weydiisan nooc kasta oo shaqaalaysiin ah haddii aad isku aragtid xaaladdan mid ka mid ah feejignow.
Si looga fogaado howlaha noocaas ah waa inaad hubisaa adigu Google Xafiisyadooda oo ay ka akhriyaan dib u eegista khadka tooska ah si laguugu kalsoonaado waxaadna sidoo kale heli doontaa qaar wakiillo shaqo ah halka ay jiraan waxay u diyaariyaan wareysiga musharraxiinta aqoonta u leh sida shaqooyinkaaga asalka ah oo weydiiso boqolkiiba inta mushaarkaaga ugu horreeya oo keliya marka aad saxiixdid warqad dalab, taasi waa wax fiican inaad daacad ahaatid, maadaama ay sidoo kale xiriir la leeyihiin shirkadda waxay ka dhigayaan shaqadaada mid aad u sahlan, sidaa darteed iyagu waa dad dhab ah kama walwalaan khiyaanooyinka halkan sida ay yihiin halkan u joog si aad u caawiso Freshers.
Isticmaal goobaha shaqada ee kaliya ee ku yaal Dubai.
Waxa kale oo aad la soo degi doontaa Adeegyada Qaybinta CV ee UAE, shaqsi ahaan waxaan kugula talinayaa inaadan u xulan midkaas sababta oo ah kaliya waxay u qaybiyaan CV-gaaga i-maylka guud ee email-ka shirkada casriga ah ee laga heli doono ayaga websaydhada ama akoonnada 'LinkedIn', halka aad sidoo kale sameyn karto waxyaabaha noocaas ah adoo raadinaya cinwaanno emayl ah boggooda soo socda.
Maalmahan gudaha UAE Abuuritaanka xirmooyin dego been abuur ah ayaa noqday wax, dakhli looga abuuro dadka aan waxba galabsan, dadka ka yimid magaalooyin kala duwan Waxay si fudud ugu dhacaan dabinka, iyagoo aan xitaa ka fikirin mar haddii ay bixiyaan lacag aad u badan khiyaanooyinka adiga oo filanaya in shaqo la soo celiyo, wax yar oo ay ka ogyihiin khayaanadahan Dubai marwalba way daba galaan dadkaas waxayna u diraan farriimo digniin ah UAE si ay uga badbaadiyaan dadka howlaha been abuurka ah ee ka jira Dubai.
Iskusoo wada duuboo waxaan dhihi lahaa Ma fududa inaad ku soo degto shaqada aad rabto, halkii aad ka qaadan lahayd heerka heerka gelitaanka ee aad ka doorbideyso warshadaha aad jeceshahay, ka dib marka aad dhammeysato heshiiskaaga ugu horeeya iyaga isku day inaad codsato boos kale oo aad bilowdo cilmi-baaristaada Xaqiiqdii waxaad heli doontaa booska aad rabto, waayo-aragnimadu waxay ku baraysaa waxyaabo badan, waxay kor u qaadi doontaa kalsoonidaada, waxaad horumarin doontaa xirfadahaaga shaqo iyo waxyaabo aad u badan. Sidoo kale, caawin dadka kale, samee shabakad, la kulan dad cusub maalin kasta raadso caawimaad iyaga oo xaqiiqdii shaqo ayaad ka heli doontaa Dubai, UAE.
Sikastaba, Haddii ay jiraan wax shaqo ah oo la mid ah astaantaada, fadlan isku day inaad garaacdo maareeyaha HR ASAP. Waa inaad diyaar u noqotaa inaad ku siiso adeegyadaaga iibka & suuqgeynta / adeegga daryeelka macaamiisha / Dib u tafaariiqda shaqooyinka ama wax kasta oo ku habboon shaqada lagu siiyay.
Inta badan shisheeyaha riyadoodu waa inay ka shaqeeyaan Wadamada GCC si kor loogu qaado fursadahahooda shaqo. Waana inaad noqotaa mid diyaar u ah inaad ka shaqayso meel kasta Wadamada khaliijka meelaha ay ka mid yihiin Dubai / Qatar / Cumaan / Abu Dhabi / Baxrayn / Kuwait iwm
Ilaa iyo inta ay ku siinayaan shaqo gobolka khaliijka. Marka, haddii aad codsaneysay shaqooyin ku xirnaanshaha qadka internetka qarnigii ugu dambeeyay ee 4 / 5 aan natiijo lahayn. Isku day inaad xoog wax yar ku dhufato. Soo rid resume kooxdayada oo bilaabi doonta inay sugto jawaab ka wanaagsan "Dubaicitycompany".
Muddadii aan ku noolaa Dubai, waxaa loo tixgeliyey sidii guriga
Sannado badan ayaa lafahayga hoos ugu dhacday.
Dubai weligeed looma tixgelin inay cillad leedahay.
Daqiiqad kasta oo la kharash gareeyay waa la qiimeeyay.
Waxay ahayd sida gabadh yar oo gabar u dhalatay gabadh quruxsan
Madow & Caddaan, dhalinyaro iyo waayeelba, dhammaantood waxay ku dhaggoodeen daawashada ganaaxan naag koraan.
Sida badaha waaweyn ee xeebta liqsan
Dubai jacaylkii oo dhan buu keenay.
Fursad weyn ayaa kugu sugaysa!.
- Qalin jabiye cusub? Waxaad noqon doontaa xiddig kacaya.
- Xirfad dhexdhexaad ah? Qoyskaagaagu wuxuu ku badbaadi doonaa dhaqankeena kobcinta.
- Senior? Waqtiga goosashada faa'iidooyinka waqti-nololeed oo khibrad leh.
Meel aad maanta joogtid, Waxaan aaminsanahay inaad isbadal ku sameyn karto maanta adigoo nagu soo biiraya Dubai. Magaaladayagii qurxoonaa- halkaasoo lamadegaanka la kulmo cirka iyo curinta cusubna ay u horseeddo adeegyo - waa gurigaaga xiga, dhaqaaqaaga weyn.
Kaalay oo ka mid noqo Magaalada Caadiga ah oo lagu dhisay sannadihii diirimaadka qoyska, farxadda, dhibaatooyinka, adkeysiga iyo waaya-aragnimada maamulka muwaaddinka si ay uga dhigto aasaas adag nolosha wanaagsan dhammaan ragga iyo dumarka shaqada badan.
Nagala soo qayb gal!
Rajaynaysaa inaad go'aansato sida Antony Raj Jayamani waxa uu ku soo xigtay Linkedin inuu yimaado Imaaradka Carabta. Shirkadda Dubai City waxay la kulantay filashooyinkaaga xagga shuruudaha siinta hage loogu talagalay ka shaqeynta iyo ku noolaanshaha Bariga Dhexe.
Raac shirkadda Dubai City ee Linkedin sida:
Antony Raj Jayamani waxa uu ku soo xigtay Linkedin!
Shirkadda DCC hadda bixinta macluumaad loogu talagalay safarada. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Shaqooyinka ku yaala Dubai. Sidaa daraadeed, arrintaan maskaxda ku haysa, waxaad hadda heli kartaa hage, talooyin iyo shaqo ku qoran Imaaraadka Imaaraadka Carabta adoo luuqaddaada ku hadlaya.